लेख Archives - Page2of 32 -
वन व्यवस्थापनको सवाल
२३ असार २०७८, बुधबार ०१:१४ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on वन व्यवस्थापनको सवाल
वन व्यवस्थापनका सवालमा विगतका दशकदेखि नै अन्तरद्वन्द्व भइरहेको छ । जब सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु भयो । त्यो बेलामा सामान्य विधान र वन कार्ययोजना एउटै दस्तावेज बनाउने चलन थियो । वनको नक्सा पनि खेस्रा अर्थात् सहभागितामूलक स्रोत नक्सा मात्र राख्ने गरिन...
२३ असार २०७८, बुधबार ००:५१ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on कोरोना महामारीका सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासनको ‘उल्टो गंगा’
रामचन्द्र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रशासकले मंगलबारबाट सबै सार्वजनिक सवारी साधनलाई कोरोना महामारी सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन हुन इजाजत दिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रशासकले गत वैसाख १६ गतेब...
१६ असार २०७८, बुधबार ०२:११ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on जातीय विवादले उत्पन्न गरेको प्रश्न
रामचन्द्र काठमाडौं । घरबेटी सरस्वती प्रधान र कोठा माग्ने रूपा सुनारको कारण उत्पन्न भएको विवादले राजधानीलाई एक पटक नराम्रोसँग तताई दिएको छ । रूपा सुनारले जातकै आधारमा कोठा दिन इन्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि बबरमहल क्षेत्रकी सरस्वती प्रधान द...
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सार्वजनिक गरेको छ । बजेट लामो छ । बजेट वक्तव्यमा ५०३ बुँदा समेटिएका छन् । अहिलेको बहस सुन्दा लाग्दछ, बजेट वक्तव्यमा भएका अरु बुँदाको कुनै अर्थ छैन यहि १९९ नै सबथोक हो । यो बुँदाल...
१६ असार २०७८, बुधबार ०२:०१ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on कोरोना महामारी र नेपालको राजनीति
कोरोना महामारीले संसारकै पुँजीवादी अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने कुरै भएन । नेपाल विस्तारै पुँजीवादी विकास गर्ने तिर उन्मुख भएको बेलामा कोरोना महामारीको चपेटामा पर्न गएको छ ...
लोकतान्त्रिक संविधान संकटमा
१६ असार २०७८, बुधबार ०१:३० Tamakoshi SandeshLeaveaComment on लोकतान्त्रिक संविधान संकटमा
नेपालको संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आम निर्वाचनपश्चात नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानुनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवं जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको सा...
संविधान उल्लंघन घोर अपराध
१६ असार २०७८, बुधबार ०१:१८ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on संविधान उल्लंघन घोर अपराध
कमलराज राई राज्यले बनाएको नियम कानुनको पालना नगरेको खण्डमा जो कोही पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ । कानुनको पालना नगर्ने जो कोही पनि सजायको भागीदार बन्ने कानुनी राज्यको प्राकृतिक सिद्धान्त हो । त्यसैले कानुनी राज्यमा त हरेक नागरिकले कानुनको पालना नगरेक...
९ असार २०७८, बुधबार ०१:५८ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on सरकार खोज्दै कृषक हैन, कृषकलाई खोज्दै सरकार पुगोस्
नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्छ । अन्य उत्पादनको तुलनामा कम लगानी गर्दा पनि हुने । सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिरको जग्गा भाडामा लिँदा पनि खासै धेरै रकम तिर्न नपर्ने । प्रायः धेरैको पुख्र्यौली जग्गा पनि हुने गरेको । बसाइँ–सराइँ तथा कामको खोजीको सिलसिलामा...
९ असार २०७८, बुधबार ०१:४७ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on प्रधानमन्त्री किन गर्छन्, एकपछि अर्को संविधानविपरीत काम ?
रामचन्द्र काठमाडौं– आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनलाई मिचेर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा विकास भएको यो प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नियन्त्रण गरेर मुलुक...
अस्पतालको विस्तार कहिले हुने ?
९ असार २०७८, बुधबार ०१:४१ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on अस्पतालको विस्तार कहिले हुने ?
दिनेश कार्की २०७७ माघमा चीनबाट नेपालमा कोरोना भाइरस भित्रियो । भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले अरु तयारी गर्नुभन्दा निषेधाज्ञालाई उपयुक्त विकल्प ठान्यो । विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना कहर २०७७ साउनदेखि क्रमशः कम भयो । २०७७ चैत महिनादेखि भाइरसको ...